Opera 10 Full Version ထွက်ပြီ — MYSTERY ZILLION
Opera 10 Full Version ထွက်ပြီ
Opera 10 Full Version ဒီနေ့ ( ၂.၉.၀၉ ) ထွက်လာပြီ ဖြစ်ပါသဖြင့် ... ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲကြပါကုန် ....... :6:
အခြား အခြားသော ဘရောက်ဇာများဖြင့် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံထူးခြားသွားသနည်းဟု ဆွေးနွေးကြပါကုန်အံ့ ....
ကျနော်သည်မူကား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသောကြောင့် စတင်သုံးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း .....
စတင်ပြီးတော့ download ဖို့ filehippo ကိုသွားနေပါပြီ။
ဘာဖြစ်လို့များ သူ့မူရင်း site ကိုမညွှန်းသလဲမသိဘူး။
အချိန်ကုန်မှာမို့ သွား:Dမကြည့်တော့ဘူး။ (မျက်နှာ:)လောက်ပဲကြည့်မယ်)
အရင်တုန်းက version တွေတော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူး။
အခြား အခြားသော ဘရောက်ဇာများဖြင့် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံထူးခြားသွားသနည်းဟု ဆွေးနွေးကြပါကုန်အံ့ .... :d
ခုလို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းထူးများ...တင်ပေးပါသော.. နောင်တော်ကြီးအား..ကျေးဇူးပကာရ တင်ပါသည်.. သို့ပါသော်လည်း မည်သို့မည်ပုံ ထူးခြား သည်ကို နောင်တော်ကြီးမှ စတင်ဆွေနွေး သင့်ပါသည် နောင်တော်...ဟော်..ဟော်..:6::68: (အချွန်နဲ့ တော့မလိုက်ပြီ..):p
Opera browser မှာ မြန်မာဗားရှင်း(file,edit,view တို့နေရာမှာ မြန်မာလို)နဲ့ ရတယ်လို့ဖတ်ဖူးတယ်. . . .ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ . .အခု Opera အသစ်မှာရော. . .အဟောင်းမှာပါ . .အဆင်မပြေဘူး . . .ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဟင် . . .
အဲဒါ opera version အဟောင်းနဲ့ တူတယ်... version ဘယ်လောက်လဲတော့ မသိတော့ဘူး..
အခုလိုပြောပြလို ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ firefox လောက်သဘော
မကျဘူး ပိန်းလို ့လားတော့မသိဘူးဗျို ့နောက်အကိုပြောတဲ့ safari ကလဲ မမြန်ဘူးဗျ ဘာလို ့လဲ
မသိဘူး ကျွန်တော် Torn city ကစားတာမတတ်ဖူး နှေးနေတယ် firefox နဲ ့သုံးကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျ ကျွန်တော်တော့ firefox နဲ ့ပဲသုံးနေတယ်
စမ်းသုံးကြည့်ချင်တဲ့လူတွေ အတွက်ပါဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း ie ကိုဘဲ အသည်းစွဲဗျ..:39::39:
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် ကျွန်တော်ကလဲ
ကျွန်တော်ထင်တာကို ပြောပြတာပါ အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာပါ
Firefox 3, Chrome, Safari4အဲဒါတွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Opera ကို ကျနော့်စက်မှာတောင်မတင်တော့ပဲ ဖြုတ်ပစ်လိုက်တာပါ ... ( အသစ်တွေ့လို့ အဟောင်းမေ့တာ *** ယောက်ကျားပီသစွာနဲ့ *** )
ခုမှ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Opera လေးကို ပြန်သုံးကြည့်မှာပါ။
Opera တော့ Firefox လောက်ျမြန်ချင်မှမြန်မှာပါ... Safari ကတော့ မြန်ပါတယ် Bro.
Firefox & Safari ကိုကျနော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ .........
Firefox သုံးနေရင်း Connection နှေးလာလို့ စိတ်မရှည်တော့ရင် Safari ပြောင်းသုံးတယ်။
Safari သုံးနေရင်း Connection နှေးလာလို့ စိတ်မရှည်တော့ရင် Firefox ပြောင်းသုံးတယ်။
Safari4က Firefox3ထက်တော့ မြန်တာသေချာပါတယ် Bro.
Safari4+ Orbit Downloader နဲ့ ဆွဲတာ ... ကျနော့်ဆီမှာတော့ IDM ထက်တောင် မြန်နေကြောင်းပါခင်ဗျာ ....
Orbit Downloader လေးလဲ နောက်ဆုံး Version ခုထွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... Version : 2.8.16 ပါ။
ဒီမှာ သွားယူနိုင်ပါကြောင်း ........ :6:
တလုံးနှစ်လုံးစမ်းပြီးပြီးဗျ သိ်ပ်မကြိုက်လှဘူး ကျွန်တော်တို့ကလဲ တယူသန်တယ်ပဲပြောမလားမသိဘူး
chrome နဲ့ firefox ကလွဲလို့ ကျန်တာ browser ကိုမထင်သလိုဖြစ်နေပြီ :D:D
orbit downloader က crack file လိုလားဗျို့နောက် idm နဲ ့ဘာကွာလဲ ပြောပြပါအုံး
Orbit က free သုံးလို့ရတာ ရှိတယ်ဗျ..။ IDM ကတော့ free မရဘူး..အရင်ကတော့ ကျွန်တော် Orbit သုံးဘူးတယ်.. RS ကို support မလုပ်လို့ IDM ကိုပြောင်းသုံးတာ..:):)